विहान यी ५ चिज देखिएमा दिनभर शुभ हुन्छ Canada Nepal
काठमाडौं - हिन्दु धर्ममा विभिन्न मान्यताहरु छन् । शास्त्रका अनुसार विहान देखिएका केही कुराहरु जसले दिनभरका क्रियाकलाप राम्रो बनाउछन् । भनिन्छ, विहान शुरुवातमा देखिएमा राम्रो भएमा दिनभर पनि राम्रो हुन्छ । शास्त्रका अनुसार विहान केही यस्ता कुरा देखियो भने शुभ र अशुभ हुन्छ ।
घरमा उठेपछि रातो बस्त्र लगाएकी स्त्री देखेमा शुभ हुने मानिन्छ । त्यस्तै विहान उठ्ने वित्तिकै धर्मग्रन्थ देखिएमा पनि राम्रो मानिन्छ । कुनै धर्मग्रन्थ अध्यन गरिरहेको वा बाचन गरिरहेको ब्यक्तिलाई उठ्ने वित्तिकै देखियो भने पनि दिन शुभ हुन्छ ।
विहान उठ्ने बित्तिकै आगोको दर्शन गरेमा राम्रो हुन्छ । विहान आगो देखेमा दिनभर उर्जासिल भइने शास्त्रमा बताइएको छ । विहान उठेपछि गाई देखिएमा पनि शुभ हुने मानिन्छ । गाईको आवाज कानमा परेमा राम्रो हुन्छ ।
अझ विहान कालो रंगको गाई देखिएमा झनै राम्रो हुन्छ । विहान उठ्ने बित्तिकै कुकुर देखेमा शुभ मानिन्छ । विहान कुकुर दर्शनले पनि दिनभर राम्रो हुने शास्त्रमा बताइन्छ । विहान उठ्ने वित्तिकै श्रृंगार गरेकी महिला देखिएमा पनि राम्रो हुन्छ ।
आषाढ २७, २०७७ शनिवार ०२:३४:०० बजे : प्रकाशित
तपाइको यो साता कस्तो छ ? हेर्नुहोस् साउन २५ देखी ३१ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
मेष राशि - साताको प्रारम्भमा गरीरहेको कार्यमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुनाले कार्य ढिलाईको सम्भाबना रहनेछ । स्वास्थका क्षेत्रमा सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । नयाँ लगानि गर्नका निम्ती बिशेष सजग रहनु पर्ने समय रहेकोछ । आर्थिक क्षेत्रमा सामान्य समस्या आईपर्नेछ । देश परदेशको यात्राको सम्भाबना रहनेछ । मगंलबार पश्चात भने कार्य क्षेत्रबाट आफन्तजनहरुको मनजित्न सफल रहिनेछ ।सामान्य पारीवारिक झोरझमेलाको सामना गर्नु पर्नेछ । ब्यापार ब्यवसायमा हानिको सम्भाबना रहेकोले साबधानि पूर्बक अघि बढ्नुहोला । अध्यन अध्यापनमा समय मध्यम रहनेछ । साताको अन्त्यतिर भने सभासम्मेलनमा सरीकहुने अवसर प्राप्त रहनेछ । कला कौलशताको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । योसाता आर्थिक क्षेत्रमा साबधानि रहनु होला ।
बृष राशि - यो साताको प्रारम्भमा पुरानो लगानि उठाउन समय उत्तम रहनेछ साथै नयाँ कार्यको थालनिले मन प्रशन्न रहला । बिद्यार्थी बर्गका निम्ती समय राम्रो रहेकोछ । रचनात्मक कार्यमा जुट्नाले मानसम्मान प्राप्ती समेत रहनेछ । साजेदारीकार्यमा भने साबधानि अपनाउनु पर्नेछ । मंगलबार पश्चात भने पारीवारिक स्वास्थमा खर्च बढ्नाले आर्थिक सङ्कटको सामनाको गर्नु पर्नेछ । गरीरहेको कार्यमा समेत समस्या उत्पन्न हुनाले मनमा खिन्नता बोधहुनेछ । मित्रजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य समस्या उत्पन्नहुन सक्नेछ । यात्राका क्रममा सामान्य चोटपटकको सम्भाबना रहेकोले सजग रहनु होला । साताको अन्त्यतिर भने स्थीर क्षेत्रमा गरीएको लगानिको उत्तम प्रतिफल प्राप्त रहनेछ । पारीवारिक साथ सहयोगमा अधुराकार्य सम्पादनमा सहजता उत्पन्न हुनेछ । योसाता कार्यक्षेत्रमा लगाईएको लगनशिलताको कदर हुनेछ ।
मिथुन राशि- साताको प्रारम्भमा सामान्य अप्रिय खबरले मन चिन्तीत तुल्याउनेछ । गरीरहेको कार्य सम्पादनमा अधिक समय ब्यतति रहनेछ साथै कार्य सम्पादनको श्रेय समेत अन्य ब्यतिहरुले प्राप्त गर्नेछन । भौतिक श्रोतसाधनको प्रयोग तथा खरिदको योग रहेकोछ । मान्यजनहरु सगँको सम्बन्धमा समस्या देखापर्ने सम्भाबना रहेकोछ । मगंलबार पश्चातभने नयाँकार्यको थालनिले मन हर्षित रहेनछ । पुराना मित्रजनहरुको सहयोगमा आर्थिक क्षेत्र दरीलो बनाउन मद्दत पूग्नेछ । पठनपाठनमा लगाईएको समय महत्वपुर्ण रहनेछ । बिद्योत बर्गहरु सगँ समय बिताउने अवसर प्राप्त रहनेछ । आफुभन्दा साना सगँमनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । साताको अन्त्यतिर अनावश्यक खर्चका कारण तात्कालिन आर्थीक अभाबको सामना गर्नुपर्नेछ । प्रतिश्पर्दा जन्य कार्यमा साबधानि अपनाउनुनै राम्रो रहनेछ ।
कर्कट राशि - यात्राकारक समय रहेकोछ । मित्रजनहरुको प्रशन्नताका निम्ती अधिक समय ब्यतित रहनेछ । कामकाजका क्षेत्रमा सामान्य सङ्घर्षका बावजुद पदोन्नतीको सम्भाबना रहनेछ । मुद्दामामिलामा फस्नुपरेता पनि विजय आफ्नै हुनेछ । पुरानो लगानि उठाउन भने समय मध्यम रहनेछ । सभासम्मेलन जन्यकार्यमा सहभागीता जनाउने अवसर प्राप्त रहनेछ । भुमि तथा बाहान शुख प्राप्त रहनेछ । पारीवारिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । सबारीसाधनको प्रयोगमा साबधानि अपनाउनु पर्नेछ । साताको अन्त्य तिर आर्थिक क्षेत्र सबल तुल्याउन नयाँ कार्यको थालनिको योग रहेकोछ । अध्यन अध्यापनमा समय उत्तम रहनेछ । योसाता कार्यप्रति लगन शिलरह निकै लाभ प्राप्त रहनेछ ।
सिंह राशि - यो साताको प्रारम्भमा स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । नजिकका मित्रजनहरु बाट धोका हुन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । गरीरहेको कार्य परीर्वतनको योग रहेकोछ साथै संचित रकम खर्चहुने सम्भाबना रहेकोछ । मान्यजनहरुको मार्गदर्शन अबलम्बन नगर्नाले सम्पादित कार्यहरु अपूर्ण रहनेछन । मित्रजनहरुको अधिक सामीप्यता अहित साबित हुनेछ । तपाई द्वारा सम्पादित कार्यको श्रेय गैर ब्यतिहरुले सहजता पूर्णढंगमा प्राप्त गर्नाले कार्य प्रति शारिरीक आलस्यता छाउनेछ । मनोरञ्जनपुर्ण यात्राको समय रहेकोछ । साताको अन्त्य तिर गरीरहेको कार्यका कारण आफन्तजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । सामान्य अप्रिय खबरले मन चिन्तीत गराउन सक्नेछ । यो साता अरुको बिश्वासमा नपरी कार्य सन्चालन गर्नु उत्तम रहेनछ ।
कन्या राशि - ब्यापार ब्यवसायमा समय उत्तम रहनेछ । नयाँकार्यको थालनिका निम्ती पारीवारिक साथसहयोग उत्तम रहेनेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा भने सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । शारीरिक आलस्यताका कारण गरीरहेको कार्यमा ढिलाईको योग रहेनछ । स्थान परिर्वतनको सम्भाबना समेत रहेकोछ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । हरकसैको पुर्ण बिश्वास गर्नाले कार्य सम्पादनमा सामान्य समस्या देखा पर्नेछ । बाणीका कारण आफन्तजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य समस्या देखा पर्नेछ । साताको अन्त्यतिर मित्रजनहरु सगँको सहकार्यमा नयाँ कार्यको थालनि भएतापनि त्यसको प्रतिफलभने त्यति उत्तम प्राप्त हुने छैन । सामान्य यात्रा पश्चात मान्यजनहरु सगँ भेटहुनेछ साथै आम्दानिका श्रोत सबल तुल्याउने उपाय समेत प्राप्त रहनेछ ।
तुला राशि - साताको प्रारम्भमा रोकिएर रहेको कार्यहरु सुचारु गर्नाले उत्तम प्रतिफल प्राप्त रहनेछ । सामाजिक कार्यको क्षेत्रमा जुट्नाले उत्तम प्रतिफल प्राप्त रहनेछ । प्रतिश्पर्दाजन्य कार्यमा अब्बल स्थान प्राप्त रहेन योग रहेकोछ । देश प्रदेशको यात्राको योग रहनेछ । ब्यापार ब्यवसायमा नयाँ लगानि उत्तम रहनेछ । सभासम्मेलनमा सहभागीता जनाउने अवसर प्राप्त रहनेछ । दाम्पत्यसम्बन्धमा रहेको उतार चढाब कम भई सुधार रहनेछ । पारीवारिक साथ सहयोग द्वारा अधुराकार्यहरु सम्पादित गर्न समय उत्तम रहेनछ । साताको अन्त्यतिरभने नजिकका मित्रजनहरुले धोका दिनाले गरीरहेको कार्यमा ढिलाईके सम्भाबना रहनेछ । सामान्य चोटपटको सामना गर्नुपर्ने सम्भाबना रहेकोले बिशेष साबधानि अपनाउनु पर्नेछ । योसाताको अन्त्यतिर नयाँ कार्यको थालनि नगर्नु उत्तम रहनेछ ।
बृश्चिक राशि - अध्यन अध्यापनका निम्ती उत्तम समय रहेकोछ । रचनात्मक कार्यको क्षेत्रबाट बौद्धिक ब्यत्तित्वहरुको मन जित्न सफल रहिनेछ । आफुभन्दा साना हरुसगँ मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । आम्दानिका बिभिन्न श्रोतहरु फेला पर्नाले मन हर्षित रहनेछ । शुभचिन्तकहरुको साथसहयोगमा जटिल कार्यहरु सम्पादित रहनेछन । परीवारका सदस्यहरुबाट टाढाँभएको महसुस रहनेछ । पुरानो लगानि उठाउन समयले साथ दिनेछ । ब्यापार ब्यवसायमा भने सामान्य घाटाको सामना गर्नुपर्ने समय रहेकोछ । साताको अन्त्यतिर शारिरीक आलस्यताका कारण कार्य सम्पादनमा बिलम्व रहनेछ । पारीवारिक सम्बन्धमा समेत सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । प्रेम सम्बन्धमा भने प्रगाढता छाउनेछ । योसाता आफ्नो कला कौशलका माध्यमबाट आम्दानि मजबुत बनाउने समय रहेकोछ ।
धनु राशि - पारीवारिक मनोरञ्जनका निम्ती समय ब्यतित रहनेछ । भौतिक श्रोतसाधन खरिद गर्ने बिशेष समय रहेकोछ । सभासम्मेलन जन्यकार्यमा सहभागीताको योग बन्नेछ । मान्यजनहरुको स्वास्थका क्षेत्रमा भने सामान्य समस्या देखापर्ने सम्भाबना रहेकोछ । कलाकौशलको प्रयोगमा आम्दानिका श्रोतहरु सबल तुल्याउन सकिने योग रहेकोछ । अध्यन अध्यापनका निम्ती निकै राम्रो समय रहेकोछ । नयाँकार्यको थालनि पछिको आम्दानिको श्रोत बन्नेछ । पुराना मित्रजनहरुसगँको भेटघाटले मन प्रशन्न रहनेछ । साताको अन्त्यतिर देशबिदेशको यात्राको योग रहेकोछ । अधुराकार्यहरु सम्पादन गर्न समयले साथ दिनेछ । सामाजिक कार्यमा जुट्ने उत्तम समय रहेकोछ । योसाता पारीवारका निम्ती खर्चिएको समय उत्तम रहनेछ ।
मकर राशि - साताको प्रारम्भ उत्तम रहनेछ मित्रजनहरुको साथसहयोग मनग्य प्राप्त रहनेछ । अधुराकार्यहरु सहजतापूर्ण ढगंमा सम्पादित रहनेछन । मनोरञ्जनमुलक यात्राको योग रहेनछ । बलतथा पराक्रममा बृद्धिहुनेछ । सामान्य अहमताले कार्य क्षेत्रमा एक्लोपन तुल्याउनेछ । पारीवारिक झोरझमेलाको सामना गर्नुपर्ने समय रहेकोछ । सवारी साधनको प्रयोगमा साबधानि अपनाउनु होला । स्थीर क्षेत्रमा लगानि लगाउने समय रहकोछ । कार्यक्षेत्रमा लगन शिलताका कारण मान्यजनहरुलाइ प्रशन्न बनाउन सकिनेछ । सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सहभागीताको अवसरप्राप्त रहनेछ । उत्तम रहनेछ । आम्दानीका श्रोतहरु सामान्य परीर्वतनको सम्भाबना रहेकोछ योसाता मनमा घमण्डलाइ उत्पन्न हुन नदिनु होला ।
कुम्भ राशि - बाणीका कारण आफन्तजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । नयाँ क्षेत्रमा लगाईएको लगानिको प्रतिफल प्राप्त गर्न केहि समय पर्खनु पर्नेछ । भोज भतेर जन्यकार्यहरुमा सहभागीता जनाउने अवसर प्राप्त हुनेछ । मित्रजनहरुको साथ सहयोगमा जटिलकार्यहरु सम्पादित रहनेछन । मनोरञ्जनमुलक यात्राको योग रहनेछ । मान्यजनहरुको मार्गदर्शन अबलम्बन गर्नाले दिर्घकालिन आम्दानीका श्रोतहरु फेला पर्नेछन । कार्य सम्पादनको श्रेय अन्यब्यतिहरुले प्राप्त गर्नाले शारिरीक आलस्यता उत्पन्न हुनेछ । साताको अन्त्यतिर पारीवारिक झोरझमेलाको सामना गर्नु पर्नेछ । मानसम्मानामा आचँआउन सक्ने सम्भाबना रहेकोले गरररिहेको कार्यका क्षेत्रमा साबधानि अपनाउनु होला । योसाता साथिभाईहरुको साथसहयोगमा अधुराकार्य हरु सम्पादन गर्न उत्तम रहनेछ ।
मीन राशि - पारिवारीक साथ सहयोगद्वारा अधुरा कार्यहरु सम्पादित रहनेछन । ब्यापार ब्यवसायका क्षेत्रमा उत्तम समय रहेकोछ । कार्यक्षेत्रमा लगाईएको लगनशिलताका कारण आफन्तजनहरुको मनजित्न सकिनेछ । अध्यनअध्यापनमा रुचि बढ्नेछ । प्रेमसम्बन्धमा प्रगाढता छाउने समय रहेकोछ । मगंलबार पश्चातभने स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । आफन्तजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुने सम्भाबना रहेकोछ । अरुको बिश्वासमा कुनैपनिकार्य नसुम्पिनु होला अन्यथा ब्यबाहारीक झन्झटमा फसिने सम्भाबना रहेकोछ । साताको अन्त्यतिर साथिभाईहरुको साथसहयोगमा अधुराकार्यहरु सम्पादित रहनेछन । मान्यजनहरु सगँ सामान्य मनमुटाबको सम्भाबना रहनेछ । योसाता नयाँलगानिमा बिशेष ध्यान पूर्याउनु होला ।ज्यो.प.सरोज घिमिरे
श्रावण २५, २०७७ आइतवार ०७:४५:४९ बजे : प्रकाशित
आजको दिन यी कार्यहरु गर्नुहोस्, आटेको काम पुरा हुनेछ !
काठमाडौं – शनिवारको दिनलाई शनिदेवको दिन मानिन्छ । आजको दिन शनिदेवलाई खुशी पारेमा आटेको कामहरु पुरा हुने विश्वास छ । न्याय प्रेमी देवताको रुपमा मानिने शनिदेवलाई प्रसन्न गरेमा विभिन्न कार्यहरु सम्पन्न हुने विश्वास छ ।
शनिबारको दिन कुनै काम गर्दा शुभ मानिन्छ भने कुनै काम गर्दा अशुभ पनि मानिन्छ । यस दिन गरेका कामहरु लामो समय टिक्ने बताइन्छ ।
आजको दिनमा जागिरको वा अन्य काम सुरु गरेमा राम्रो हुने विश्वास गरिएको छ । त्यस्तै आज फलाम खरिद विक्री गर्नु र विवाह गर्नु राम्रो मानिन्छ । त्यस्तै आज समस्यामा परेकालाई दान गर्नु शुभ मानिएको छ ।
शनिवारको दिन कपडा कालो रंगको लागाउने, बैजनी रंगको फुल आफुसंग राख्ने गरेमा आटेको काम पुरा हुने बिश्वास छ । आजको दिन कुनै नयाँ काम गर्न घरबाट निस्कनु परेमा घ्यु खानु राम्रो हुन्छ ।
श्रावण २४, २०७७ शनिवार १२:२१:५४ बजे : प्रकाशित
माता मनकामनाले तपाईको मनोकामना पूरा गरुन्, हेर्नुहोस् आज २०७७ साल साउन २३ गते शुक्रबारको राशिफल
श्रावण २३, २०७७ शुक्रवार १९:१८:०३ बजे : प्रकाशित
भगवान मुक्तिनाथले तपाईको मनोकामना पूरा गरुन्, हेर्नुहोस् आज २०७७ साल साउन २२ गते बिहिबारको राशिफल
मेष राशि - साजेदारी कार्यमा बिशेष सजग रहनु होला । आफुभन्दा सानाको सहयोगमा मनग्य लाभ प्राप्त हुनेछ । बोलिको प्रभाव बढ्नाले ईष्ट मित्रको साथ मिल्नेछ । अध्यन अध्यापनमा समय उत्तम रहेकोछ । कलाकौशलका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहने छ । नयाँ कार्यको थालनि गर्न राम्रो समय रहेको छ ।
बृष राशि - मान्यजन तथा पारिवारीक साथसहयोगमा केहि दुरताको सामना गर्नु पर्ला । भौतिक साधनको प्रयोगमा बिशेष ध्यान दिनु राम्रो रहनेछ । बिद्या तथा बौधिक क्षेत्रमा भने राम्रो समय रहेको छ । सबारी साधनको प्रयोगमा बिशेष साबधानि अपनाउनु पर्नेछ । सम्पादित कार्यहरुका क्षेत्रमा सामान्य झन्झट आई पर्नेछ ।
मीथुन राशि - नसोचेका क्षेत्रमा सामान्य खर्च हुनाले मनमा खिन्नता पैदा हुनेछ । आटँ र शाहसमा बृद्धि भएता पनि साथिभाई हरु टाडिएको अनुभव हुन सक्ला । मान्यजनहरुको साथ सहयोगमा गरीएका कार्यहरु उत्तम रहनेछन । कामकाजको क्षेत्रमा भने बिशेष सजग रहनु होला अपजसआईपर्ने योग रहेको छ ।
कर्कट राशि - खानपानमा बिशेष ध्यान दिनुहोला । सामान्य चोट पटक वा स्वास्थ सम्बन्धी समस्याको सामना गनुपर्नछ । नजिकका मित्रजनहरुको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । अरुको बिश्वासमा नपर्नुनै उत्तम रहनेछ । बोलिको गलत अर्थ लाग्न सक्ला तसर्थ वाणीमा ध्यान दिनुहोला ।
सिंह राशि - खुट्टा तान्ने ब्यक्ति हरुको बृद्धि हुनाले कार्यसम्पादनमा बिशेष होसियार हुनु पर्ने छ । निर्णय गर्ने क्षमतामा कमि आउने छ । खानपानमा रुचि जाग्नेछ । अधुराकार्य सम्पादनका निम्ती समय उत्तम रहनेछ । शारीरिक आलस्यताका कारण कार्यक्षेत्रमा अपजसको सम्भाबना रहनेछ ।
कन्या राशि - सामान्य कार्यको निम्ति धेरै समय र परीश्रम खर्चनु पनेछ । मनमा सामान्य चिन्ताले बास गर्नेछ । परीवारका सदस्यहरु बाट टाढा भएको महसुस हुनेछ । तात्कालिन आर्थीक अभाबको सामना गर्नुपर्नेछ । नजीकका ब्यत्तित्वहरुबाट धोका हुनाले कार्य सम्पादनमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
तुला राशि - पठनपाठनको क्षेत्रमा समय मध्यम रहेको छ । आम्दानिका स्रोतहरु फेला पर्नाले मनमा उत्साहा छाउनेछ । अरुको भर पर्नाले सामान्य झन्झट ब्यर्होनु पर्ला । मान्यजनहरुको साथ सहयोगमा अधुराकार्य हरु सम्पादित रहनेछन । कला कौशलका क्षेत्रमा खर्चिएको समय उत्तम रहनेछ ।
बृश्चिक राशि - सभासम्मेलनमा सहभागि हुन सक्ने योग रहेको छ । मानसम्मान प्राप्तिको सम्भाबना रहेको छ । ब्यापार ब्यवसायमा समय राम्रो रहेको छ । आम्दानि मध्यम रहला । सामाजिक कार्यमा जुट्ने समय रहेकोछ । मानसम्मान प्राप्तीको योग रहेकोछ । सवारि साधनको प्रयोमा ध्यान पूर्याउनु होला ।
धनु राशि - सामान्य यात्रा हुनसक्ला । मित्र तथा दाजु भाई बिचको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । श्रम र परीश्रमको राम्रो कदर हुने योग रहेको छ । मनोरञ्जन मुलक यात्राको सम्भाबना रहेकोछ । माल सामान हराउन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । अपरीचित ब्यत्तिहरुको बिश्वासमा नपरेकै बेश रहनेछ ।
मकर राशि - आजको लगानि भोलिका निम्ति फाईदा जनक हुनेछ । स्वास्थ सम्बन्धी समास्याले सताउन सक्छ । अरुको भर पर्दा कार्यक्षेत्रमा सामान्य अप्जसआउनसक्छ । मान्यजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । सामान्य बादबिवादको झमेलामा फसिने सम्भाबना रहेकोछ ।
कुम्भ राशि - पारीबारिक झोर झमेलाले सताउन सक्छ । तपाईको कार्यको फाईदा अरुले सहजै लिन सक्नेछन । तपाईको सरल मिजासले मित्रजनहरु आकर्शित हुने योग रहेको छ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । ब्यापार ब्यवसायका निम्ती उत्तम समय रहेकोछ ।
मिन राशि - खुट्टा तान्ने ब्यक्तिहरु बाट बच्नु पर्ने समय रहेको छ । सामान्य आर्थिक अभाब झेल्नु पर्ला । पारीबारिक झोर झमेलाले सताउन सक्छ । स्वास्थमा सामान्य समस्या आउन सक्छ । खानपानको गडबढिका कारण सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । कार्य क्षेत्रमा अरुको दबाबको महसुस हुनेछ ।ज्यो.प.सरोज घिमिरे
श्रावण २२, २०७७ बिहिवार ०१:३८:०० बजे : प्रकाशित
हलेसी महादेवले तपाईको मनोकामना पूरा गरुन्, हेर्नुहोस् आज २०७७ साल साउन २१ गते बुधबारको राशिफल
श्रावण २१, २०७७ बुधवार ०१:२४:०० बजे : प्रकाशित
आज गाईजात्रा पर्व मनाईंदै
काठमाडौँ - भाद्र कृष्ण प्रतिपदादेखि अष्टमीसम्म आठ दिन मनाइने परम्परागत सांस्कृतिक पर्व ‘गाईजात्रा’ आज विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी देशभर आरम्भ गरिँँदैछ । आजका दिन एक वर्षभित्र दिवङ्गत भएका आफन्तको सम्झनामा गाई वा मानिसलाई गाईका रूपमा सिङ्गारी आ–आफ्ना क्षेत्रमा परिक्रमा गराउने र उनीहरूलाई श्रद्धालुद्वारा दूध, फलफूल, रोटी, चिउरा, दहीका साथै अन्न र द्रव्य दान गरिन्छ । यसरी नगरपरिक्रमा गर्नाले वर्षभरि मृत्यु भएका व्यक्तिहरू गाईको पुच्छर समाई वैतरणी पार हुन्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ ।
श्रावण २०, २०७७ मंगलवार ०२:२३:०० बजे : प्रकाशित